လီဗာပူးပှဲခနျ့မှနျးမှနျခဲ့တဲ့ အိုဝငျ ဒီည ယူနိုကျတကျပှဲကို ဘယျလိုတှပွေောထားလဲ? – MAN U FAN CLUB
ပွီးခဲ့တဲ့ ပှဲမှာ အိုဝငျက လီဗာပူးကို အနိုငျပေးခဲ့ပွီး လီဗာပူးအသငျးနိုငျသှားခဲ့တယျဆိုတော့ မှနျတယျလို့ပွောလို့ရတယျ။ ဂိုးပွတျသှားခဲ့တာကတော့ ဆိုးလျရှားရဲ့ ကုသိုလျပေါ့ ဒီတဈပတျမှာ အိုဝငျက ယူနိုကျတကျနိုငျမယျဆိုပွီးခနျ့မှနျးပေးထားပွနျပွီ…
စပါးအသငျးက ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီက မျောရငျဟိုနဲ့အတူ အိုးထရကျဖို့မှာ (၁-၆)ရလဒျနဲ့ ဂိုးပွတျနိုငျခဲ့ဖူးတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခု စပါးနညျးပွ နူနိုဆနျးတိုဈ့က ရလဒျမကောငျးလို့ အထုတျခံရတော့မယျ နညျးပွ၊ ပရီမီးယားလိဂျ (၉) ပှဲကစားပွီခြိနျမှာ ၄ ပှဲ ရှုံးပွီး အဆငျ့ (၆) နရောမှာ ရှိနတေဲ့ စပါးနဲ့ (၃)ပှဲရှုံး (၂)ပှဲ သရကေပြွီး အဆငျ့ (၇) နရောမှာ ရှိနတေဲ့ ယူနိုကျတကျရဲ့ တှဆေုံ့မှုက ပုံမှနျလိဂျ ပှဲတှထေကျ ဒီတဈပတျမှာ စိတျဝငျစားဖို့ ကောငျးနမှော သခြောတယျ။
“ရာသီအစောပိုငျးပဲ ရှိသေးပမေယျ့ ဒီနှဈသငျးရဲ့ ဘောလုံးရာသီက ဘယျလိုဖွဈလာမလဲ ကွိုသိနသေလို ခံစားရတယျ။ စပါးမှာ ဘာတှဖွေဈနတေယျဆိုတာကို ကြှနျတျော မသိပါဘူး။ သူတို့ကို ကွညျ့လိုကျတိုငျးမှာ သူတို့က ပွနျလာမလိုလိုနဲ့ ပွီးရငျလညျး ဝကျဈဟမျးကို ရငျဆိုငျတုနျးက စိတျပကျြစရာ ခွစှေမျးမြိုး ပွတော့တာပါပဲ။”
“လီဗာပူးကို ရငျဆိုငျတုနျးက ခံစဈကစားပုံကတော့ ယူနိုကျတကျရဲ့ အဆိုးဆုံး ပုံစံပါပဲ။ သူတို့ သိပျကို ဆိုးရှားခဲ့တယျ။ တိုကျစဈကစားပုံတော့ ကောငျးပါတယျ။ ပှဲအစောပိုငျးမှာတငျ အခှငျ့အရေးတှေ ရခဲ့ပွီး သူတို့ ခွိမျးခွောကျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ အသငျးမှာ ယုံကွညျမှုတှေ ကဆြငျးနပွေီး ရျောနယျဒိုက ဒါတှကေို ညှိပေးပါလိမျ့မယျ။”
“နညျးပွနှဈဦးလုံးက ဖိအားတှနေဲ့ပါ။ အထူးသဖွငျ့ အိုလီပေါ့။ မနှဈတုနျးက ယူနိုကျတကျဟာ ဒီကှငျးမှာပဲ ၃-၁ ဖွငျ့ အနိုငျရခဲ့သလို စပါးအိမျကှငျးသဈမှာ သူတို့ မရှုံးဖူးသေးပါဘူး။ ယူနိုကျတကျက အသာရနိုငျခွရှေိပါတယျ” ဆိုပွီး အိုဝငျက ပွောပါတယျ။ အိုဝငျရဲ့ ခနျ့မှနျးရလဒျကတော့ ယူနိုကျတကျ ၂- ၁ စပါး ဖွဈပါတယျ။
ဆိုးလျရှားတဈယောကျ သူအလှတျကကျြထားတဲ့ ၄-၂-၃-၁ ကစားကှကျနဲ့ပဲ ဆကျပွီးပှဲထှကျလာအုံးမလား…? ပေါ့ဂျဘာ အနီကတျ ထိထားတဲ့အခွအေနမှော ဗနျဒီဘိချကို ပှဲထှကျခှငျ့ပေးလာမလား…? ဒီပှဲဟာ ဆိုးလျရှားအတှကျနောကျဆုံးပှဲဖွဈသှားနိုငျသလို၊ ယူနိုကျတကျရဲ့ အရံခုံပျေါမှာ ရောကျနကွေတဲ့ စူပါစတားတှရေဲ့ကစားအားတှကေို ဆိုးလျရှား ထုတျသုံးတော့မလားဆိုတာကလညျး စောငျ့ကွညျ့ခငျြစရာပါပဲ။ ဆကျပွီးဆိုးလျရှားအနနေဲ့ နညျးဗြူဟာပိုငျးအားနညျးနခြေိနျမှာ ယူနိုကျတကျမှာ ဆကျရှိနဖေို့ဆိုရငျ ပရိသတျတှေ မွငျခငျြနတေဲ့ ကစားသမားအတှဲတှကေို သူတို့အားသာတဲ့ နရောတှမှော ကစားခှငျ့ ပေးလိုကျမှ ဖွဈတော့မှာပါ။
လီဗာပူးပွဲခန့်မှန်းမှန်ခဲ့တဲ့ အိုဝင် ဒီည ယူနိုက်တက်ပွဲကို ဘယ်လိုတွေပြောထားလဲ?
ပြီးခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ အိုဝင်က လီဗာပူးကို အနိုင်ပေးခဲ့ပြီး လီဗာပူးအသင်းနိုင်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ မှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ ဂိုးပြတ်သွားခဲ့တာကတော့ ဆိုးလ်ရှားရဲ့ ကုသိုလ်ပေါ့ ဒီတစ်ပတ်မှာ အိုဝင်က ယူနိုက်တက်နိုင်မယ်ဆိုပြီးခန့်မှန်းပေးထားပြန်ပြီ…
စပါးအသင်းက ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီက မော်ရင်ဟိုနဲ့အတူ အိုးထရက်ဖို့မှာ (၁-၆)ရလဒ်နဲ့ ဂိုးပြတ်နိုင်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု စပါးနည်းပြ နူနိုဆန်းတိုစ့်က ရလဒ်မကောင်းလို့ အထုတ်ခံရတော့မယ် နည်းပြ၊ ပရီမီးယားလိဂ် (၉) ပွဲကစားပြီချိန်မှာ ၄ ပွဲ ရှုံးပြီး အဆင့် (၆) နေရာမှာ ရှိနေတဲ့ စပါးနဲ့ (၃)ပွဲရှုံး (၂)ပွဲ သရေကျပြီး အဆင့် (၇) နေရာမှာ ရှိနေတဲ့ ယူနိုက်တက်ရဲ့ တွေ့ဆုံမှုက ပုံမှန်လိဂ် ပွဲတွေထက် ဒီတစ်ပတ်မှာ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းနေမှာ သေချာတယ်။
“ရာသီအစောပိုင်းပဲ ရှိသေးပေမယ့် ဒီနှစ်သင်းရဲ့ ဘောလုံးရာသီက ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ ကြိုသိနေသလို ခံစားရတယ်။ စပါးမှာ ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော် မသိပါဘူး။ သူတို့ကို ကြည့်လိုက်တိုင်းမှာ သူတို့က ပြန်လာမလိုလိုနဲ့ ပြီးရင်လည်း ဝက်စ်ဟမ်းကို ရင်ဆိုင်တုန်းက စိတ်ပျက်စရာ ခြေစွမ်းမျိုး ပြတော့တာပါပဲ။”
“လီဗာပူးကို ရင်ဆိုင်တုန်းက ခံစစ်ကစားပုံကတော့ ယူနိုက်တက်ရဲ့ အဆိုးဆုံး ပုံစံပါပဲ။ သူတို့ သိပ်ကို ဆိုးရွားခဲ့တယ်။ တိုက်စစ်ကစားပုံတော့ ကောင်းပါတယ်။ ပွဲအစောပိုင်းမှာတင် အခွင့်အရေးတွေ ရခဲ့ပြီး သူတို့ ခြိမ်းခြောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အသင်းမှာ ယုံကြည်မှုတွေ ကျဆင်းနေပြီး ရော်နယ်ဒိုက ဒါတွေကို ညှိပေးပါလိမ့်မယ်။”
“နည်းပြနှစ်ဦးလုံးက ဖိအားတွေနဲ့ပါ။ အထူးသဖြင့် အိုလီပေါ့။ မနှစ်တုန်းက ယူနိုက်တက်ဟာ ဒီကွင်းမှာပဲ ၃-၁ ဖြင့် အနိုင်ရခဲ့သလို စပါးအိမ်ကွင်းသစ်မှာ သူတို့ မရှုံးဖူးသေးပါဘူး။ ယူနိုက်တက်က အသာရနိုင်​ခြေရှိပါတယ်” ဆိုပြီး အိုဝင်က ​ပြောပါတယ်။ အိုဝင်ရဲ့ ခန့်မှန်းရလဒ်က​တော့ ယူနိုက်တက် ၂- ၁ စပါး ဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုးလ်ရှားတစ်​ယောက် သူအလွတ်ကျက်ထားတဲ့ ၄-၂-၃-၁ ကစားကွက်နဲ့ပဲ ဆက်ပြီးပွဲထွက်လာအုံးမလား…? ပေါ့ဂ်ဘာ အနီကတ် ထိထားတဲ့အခြေအနေမှာ ဗန်ဒီဘိခ်ကို ပွဲထွက်ခွင့်ပေးလာမလား…? ဒီပွဲဟာ ဆိုးလ်ရှားအတွက်နောက်ဆုံးပွဲဖြစ်သွားနိုင်သလို၊ ယူနိုက်တက်ရဲ့ အရံခုံပေါ်မှာ ရောက်နေကြတဲ့ စူပါစတားတွေရဲ့ကစားအားတွေကို ဆိုးလ်ရှား ထုတ်သုံးတော့မလားဆိုတာကလည်း စောင့်ကြည့်ချင်စရာပါပဲ။ ဆက်ပြီးဆိုးလ်ရှားအနေနဲ့ နည်းဗျူဟာပိုင်းအားနည်းနေချိန်မှာ ယူနိုက်တက်မှာ ဆက်ရှိနေဖို့ဆိုရင် ပရိသတ်တွေ မြင်ချင်နေတဲ့ ကစားသမားအတွဲတွေကို သူတို့အားသာတဲ့ နေရာတွေမှာ ကစားခွင့် ပေးလိုက်မှ ဖြစ်တော့မှာပါ။
၂၀၂၁ Golden Boy ဆု ပဏာမ(၂၀)စာရငျးမှာ ဘယျလငျဂမျ၊ ဆာကာနဲ့ဂရငျးဝုဒျတို့ ဆကျလကျပါဝငျ